Cathy DollPetit Ice-Cream Magic Blender | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
ပစ္စည်းအမျိုးအစား အားလုံး Kaymu စတိုး Kaymu ဖက်ရှင် Kaymu ဖုန်းများ Kaymu အိမ်သုံးပစ္စည်းများ ဖက်ရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ညအိပ်ဝတ်စုံများ အသုံးအဆောင်များ အမျိုးသားများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ခြေအိတ်များ အသုံးအဆောင်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသား) ဂျင်းဘောင်းဘီများ ရှပ်များ နာရီများ အိတ်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသမီး) ဂါဝန်များ အိတ်များ နာရီများ လက်ဝတ်ရတနာများ TOP BRANDS TIMBERLAND NICHII OUTDOOR PRODUCTS COZY CORNER SPRINGFIELD YANGOODS အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသမီးသုံး အမျိုးသားသုံး မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများ အလှပြင် ပစ္စည်းများ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများ မျက်နှာအတွက် ကိုယ်ခန္ဒာအတွက် အလှအပရေးရာ စက်များ လက်သည်းအလှအပ ခြေ/လက်အလှအပ လက်သည်းနီ/ခြေသည်းနီများ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ပျော့ဆေးများ ဆံကေသာသုံး ပစ္စည်းများ အမျိုးသားများအတွက် အသားအရေအတွက် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆေးဝါးမျိုးစုံ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိရိယာများ ဖြည့်စွက်ဆေးများ Top Brands MAYBELLINE YVES ROCHER MA'SURI POND'S ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ စမတ်ဖုန်းများ ခလုတ်ဖုန်းများ ကြိုးဖုန်းများ ဆက်စပ်ပစ္စည်များ စမတ်နာရီများ နားကြပ်များ စပီကာများ မမ်မိုရီကတ်များ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အကာ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးများ ဖုန်းအိတ်နှင့်ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝါဘန့်များ တက်ဘလက်များ iPadများ ၈လက်မနှင့်အထက် ၈လက်မအောက် TOP BRANDS SAMSUNG XIAOMI APPLE SONY HUAWEI LENOVO ကွန်ပြူတာများ လက်ပတော့ပ် များ နုတ်ဘုတ်များ Macbook များ ပရင်တာနှင့်စကန်နာများ ဘက်စုံသုံးပရင်တာများ လေဆာပရင်တာများ ရုံးသုံးပရင်တာများ ဟာ့ဒစ်စ်နှင့်မန်မိုရီကဒ်များ ဟာ့ဒစ်စ်များ မမ်မိုရီကဒ်များ မမ်မိုရီ စတစ်များ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ လက်ပတော့ပစ္စည်းများ နားကြပ်နှင့် စပီကာများ ကီးဘုတ်များ ဒီဗီဒီစက်များ နက်ဝေါ့ပစ္စည်းများ ပရောဂျက်တာများ အခြားပစ္စည်းများ မောက်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ကာဗာနှင့်အိတ်များ ဘတ်ထရီ နှင့် အားသွင်းကြိုးများ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ ဒက်စတော့်ပ်နှင့်မော်နီတာများ All-in-ones တာဝါများ မော်နီတာများ TOP BRANDS Acer HP Asus ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ အိမ်သုံးဂိမ်းစက်များ အိတ်ဆောင်ဂိမ်းစက်များ ဂိမ်းစက်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဂိမ်းခွေများ Playstation ဂိမ်းခွေများ Xbox ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Nintendo Wii ဂိမ်းခွေများ Nintendo DS ဂိမ်းခွေများ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကင်မရာများ ကင်မရာများ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာများ ပိုလာရွိုက်ကင်မရာများ ဗီဒီရိုကင်မရာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မမ်မိုရီကဒ်များ ဆယ်လ်ဖီစတစ်များ ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ တီဗီများ LED တီဗီများ စမတ်တီဗီများ Plasma တီဗီများ Blu Ray နှင့် DVD စက်များ DVD Players Blu Ray Players iPod နှင့် MP3 များ နားကြပ်များ MP3 နှင့် အသံဖမ်းစက်များ စပီကာနှင့်အသံချဲ့စက်အသေးများ တီဗီ၊ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 3D မျက်မှန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်စနစ်များ စပီကာစနစ်များ စပီကာများ စပီကာများ ဒီဂျေ နှင့် ကာရာအိုကေ Hi-Fi စနစ် ကားဂျီပီအက်စ်နှင့်အသံစနစ်များ ကားတွင်းသုံးတီဗီများ TOP BRANDS Samsung Panasonic Philips Sony JVC အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အိမ်သုံးပစ္စည်းအကြီးများ ရေခဲသေတ္တာနှင့်ရေခဲစက်များ ပန်ကာများ လေအေးပေးစက် အ၀တ်လျှော်စက် အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ ဖုန်စုပ်စက်များ မီးပူ ရေနွးအိုးနှင့်ရေပူပေးစက်များ လေသန့်စင်ပေးစက် ရေပူ၊ရေအေးစက် အ၀တ်အထည်ထိန်းသိမ်းမှု ရေသန့်စက်များ လျှပ်စစ်မီးများ မီးဖိုချောင်သုံးစက်ပစ္စည်းများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ထမင်းပေါင်းအိုး မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို ဟင်းချက်ပစ္စည်းများ ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ အိမ်ပြင်ပသုံးစက်ကိရိယာများ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများ ပရိဘောဂများ အိမ်သုံး ရုံးသုံး TOP BRANDS Samsung New World Hisense ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဂဏန်းပေါင်းစက်များ စက်ကိရိယာများ ကလေးများအတွက် ကလေးငယ်များ စောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများ အသုံးအဆောင်များ အခြားကလေးသုံး ပစ္စည်းများ ကစားစရာများ Hand Fidget Spinners စားသောက်ကုန်များ စားသောက်ကုန်နှင့်အချိုရည်များ စားသောက်ကုန်များ အချိုရည်များ ၀ိုင်နှင့်ယမကာများ အခြား အကြောင်းအရာကဏ္ဍများ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်သုံးပစ္စည်းများ ပွဲများနှင့်လက်မှတ်များ စာအုပ် နှင့် စာရေးကိရိယာများ အားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး ဈေးဝယ်လှည်း အကူအညီ လိုအပ်လျှင် Login ပင်မစာမျက်နှာ အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး မိတ်ကပ် အလှပြင် ပစ္စည်းများ Cathy Doll Petit Ice-Cream Magic Blender Cathy Doll Petit Ice-Cream Magic BlenderBy Cathy Doll (1) သုံးသပ်ချက် ရေးရန် > ဆိုဒ်/အရောင်ကွဲ # Blue Berry #1 Mint အသေးစိတ် ကြည့်ရှုရန် အဓိက အကြောင်းအရာများမိတ်ကပ်လိမ်းဘရပ်ရ်ှအလုံးလိမ်းခြယ်ရလွယ်ကူခြင်းမိတ်ကပ်ညီညာစေခြင်းဆေးကျောရလွယ်ကူခြင်း Ks 4,900 ယခု ၀ယ်ယူရန် မှတ်ထားရန် ရောင်းချသူ7Seas Winner Trading Co.,Ltd ပစ္စည်းပို့ရန် ကြာချိန်2-7ရက် ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်း ပို့ပေးပါသည်။ ပစ္စည်းရောက် ငွေချေစနစ် ၇ရက်အတွင်း အခမဲ့ပြန်ပို့နိုင်မှု အသေးစိတ်ကြည့်ရန် : Return Policy ကုန်ပစ္စည်း စစ်မှန်မှု သုံးသပ်ချက်များဖော်ပြချက်အညွှန်းအချက်အလက်များဝယ်ပြီးပစ္စည်း ပြန်ပို့ခြင်း/ပြန်လဲခြင်း5မှတ် (1)4 မှတ် (0)3 မှတ် (0)2 မှတ် (0)1 မှတ် (0)
ပျမ်းမျှအမှတ်ပေးချက် 51 နှုန်းအား အခြေခံ၍ ဤကုန်ပစ္စည်းအား သင်ယခင်က သုံးစွဲဖူးပါသလား?5432 1 သုံးသပ်ချက် ရေးရန် မှတ်ချက်အားလုံးEllie2015 ဒီဇငျဘာ 17 super good!This Cathy Doll blender is really easy to use and essential for makeup. As it can be washed, it lasts long. Really very good. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန် ပျိုမေတို့ မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ရာတွင် လက်ဖြင့် လိမ်းခြင်းထက် ထိရောက်စေသော မိတ်ကပ် ဘရပ်ရ်ှလေးများ ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ကပ် (သို့) လိမ်းခြယ်လိုသည့် ခရင်မ်များကို စုပ်ယူခြင်းမရှိဘဲ အသားပေါ်တွင် ညီညာမျှတစွာ လိမ်းခြယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ကပ်ရည်၊ BB cream, concealer အစရှိသည့် မိတ်ကပ်အမျိုးမျိုး လိမ်းခြယ်ခြင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး မျက်နှာအသားအရေပေါ်တွင် တညီတညာတည်း ဖြစ်စေပါသည်။2WAY ပေါင်ဒါများအတွက် ရေစွတ်ပြီးလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဘရပ်ရှ်၏ အ၀ိုင်းဘက်ကိုပါးပြင်၊ နှဖူး စသည့်နေရာများအတွက် သုံးနိုင်ပြီး အချွန်ဘက်အခြမ်းဖြင့် နှာရိုး၊ မျက်လုံးအောက် နှင့် နှဖူးစပ်များကဲ့သို့ လိမ်းရခက်ခဲသော နေရာများတွင် သုံးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။မျက်နှာတပြင်လုံးကို နှံ့စပ်ညီညာအောင် ခြယ်သနိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် မိတ်ကပ်ပညာရှင်ဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း လှပသော မျက်နှာလေးကို ပုံဖော်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အဓိက အကြောင်းအရာများမိတ်ကပ်လိမ်းဘရပ်ရ်ှအလုံးလိမ်းခြယ်ရလွယ်ကူခြင်းမိတ်ကပ်ညီညာစေခြင်းဆေးကျောရလွယ်ကူခြင်းကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Petit Ice-Cream Magic Blender SKUCA791HBAA7TRNAFAMZ Weight (kg)0.01 ဤပစ္စည်းကို ၀ယ်ပြီးအဆင်မပြေလျှင် ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ပါသလား? ဤပစ္စည်းကို ၀ယ်ယူပြီး အဆင်မပြေမှု တစ်စုံတရာ ရှိပါက သင်လက်ခံရရှိသောနေ့မှ စ၍ ၇ရက်အတွင်း ပြန်လည် ပေးပို့ပြီး ငွေပြန်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။